Madaxweynaha Soomaaliya oo Khartuum lagu soo dhaweeyay – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Soomaaliya oo Khartuum lagu soo dhaweeyay
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomalaiya mudane Xasan Sheikh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Abuuja ee dalka Nigeria ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu gaaray magaalada Khartuum ee cariga dalka Sudan halkaasi oo madaxweynaha iyo wafdigiisa si diiran loogu soo dhaweeyay.
Mudane Xasan Sheikh Maxamuud Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta barito ah uu ka qayb galo xaflada caleema saarka madaxweynaha dalkaasi Sudan mudane Cumar Xasan Al bashiir oo xilkaasi ku guuleystay doorashii dhawaan ka dhacday dalkaasi dhowr jeer oo horana isaga ayaa ku guuleystay xilkaan.
Wasiir ku xigeenka wasaarada arimaha dibada xukuumadda federaalka ah ee dalka Soomaaliya Axmed Cali Kadiye oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda ee Sudan gaaray ayaa waxaa uu ka warbixiyay imaashaha wafdiga ee dalka Sudan isagoo sheegay in inta madaxweynuhu dalkaas joogo uu kulamo gaar gaar ah la qaadan doono madax kala duwan oo caalamka ka socota.
“Wafdiga madaxweynaha waxaa uu ka qayb gali doonaa caleema saarka madaxweynahaJamhuuriyadda Sudan mudane Cumar Xasan Al bashiir oo ka dhici doonta barito labada bisha Khartuum hadii alle yiraahdo wafdiga inta uu joogo madaxweynaha waxaa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalkani Sudan oo uu ugu horeeyo madaxweynaha iyo madaxda kale ee caalamka oo ka soo qayb gasha caleema saarka madaxweynaha haduu ilaahay idmo”ayuu yiri wasiirka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wadanka Nigeria magaala madaxdiisa Abuuja waxaa uu uga soo qayb galay xaflad lagu caleema saarayay madaxweynaha cusub ee wadankaasi Maxamuud Buxaari kaasi oo ku guuleystay doorashii dalkaasi ka dhacday waxaana uu madaxweynuhu sidoo kale kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha dalkaasi Nigeria oo ay ka wada hadleen arimo dhowr ah oo quseeya xiriirka labada dal.
Marwada madaxweynaha oo deeq ku wareejisay gudigga gurmadka qaxootiga Yemen